Kedu ihe bụ ọrụ nke ekwentị mkpanaaka na Ecommerce? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ ọrụ nke ekwentị mkpanaaka na Ecommerce?
Na oge ebe ihe niile na-abawanye dijitalụ, ndị na-azụ ahịa na-achọ ihe ngwọta maka mkpa ha kwa ụbọchị. Site n'ịkpọ tagzi ka ị na-atụ ụtụ isi gị, ngwọta ekwentị na-arịwanye elu na ọnụọgụ ego Ma n'ezie, otu n'ime ngalaba teknụzụ igwe na-eto ngwa ngwa bụ e-commerce.
Na n'ihi ego nke - ngwa ahia maka ekwentị na mbadamba, ewu ewu ya abụrụla nnọọ ihe dị mkpa ma dị mkpa. O zuo ezuo ịsị na ahịa azụmahịa mkpanaka na ahịa ndị America toro site na 75 ruo trillion trillion 104 n'afọ gara aga, na-anọchite mmụba nke 38.7%.
Onu ogugu a ka ogesi na-eto eto ebe obu na ahia ruru iri ijeri dolla iri ato na ise n'ime afo 350. Ma ebe na United States enwere ike e-commerce dị ike ma dị irè, ecommerce ekwentị buru ibu karịa otu ụlọ ahịa.
Dika data sitere na omumu nke emere Onye na-ere ahịa na ntanetị, gosipụta na agbanyeghị ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ndị ọrụ erughị nke United States, Ahịa Asia nwere ọganihu dị oke ọnụ ahịa 240% na ecommerce mkpanaka ha na afọ gara aga. Nke a ji okpukpu isii too uto na United States.
N'aka nke ọzọ, Ahịa Europe nwere uto 71% jiri ya tụnyere afọ gara aga, ebe na Latin America enwere uto nke 60%. Nnyocha na-egosikwa na mmụba ndị a na azụmaahịa ekwentị bụ nsonaazụ nke ndị ọbịa na-enweta ma zụta site na ekwentị ha.
N'eziokwu, ndị na-agagharị agagharị na-akọ akụkọ nleta dị ijeri 3 kwa ọnwa gaa na saịtị ha, nke fọrọ nke nta ka 70%. N'ime nleta ndị a niile, nde mmadụ 965 bụ ndị ọbịa pụrụ iche, ọnụ ọgụgụ mụbara 44% na afọ gara aga.
Ọzọkwa, a na-atụ anya na Azụmahịa mkpanaka na-enweta uto nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ karịa uto ụwa nke Ecommerce na nyiwe niile, nke doro anya na-agwa anyị oke mkpa ọ dị na ngalaba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » elekọta mmadụ media » Kedu ihe bụ ọrụ nke ekwentị mkpanaaka na Ecommerce?
IV Ecommaster Congress nke Ecommerce na ahịa dijitalụ haziri
Nzukọ Cross-Border Summit 1to1; Ihe omume Ecommerce na Barcelona